[16 / 10 / 2019] Gaziray ဘူတာရုံများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားသိုလှောင်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း	27 Gaziantep
[16 / 10 / 2019] UTİKADထိပ်သီးအစည်းအဝေး 2019 သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ For ကိုရှေ့သို့လှည့်သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[16 / 10 / 2019] ကမ္ဘာတဝှမ်း 25 စီမံကိန်းအသစ်ကိုထောက်ပံ့ရန် Alstom Foundation	33 ပြင်သစ်
Homeအထွေထွေသမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: တူရကီနှင့်သြစတြီးယားအကြားစက်တင်ဘာလ 21 2006
21 / 09 / 2019 Levent Elmastaş အထွေထွေ, တူရကီ, ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက် 0
21 စက်တင်ဘာလ 1923 အရှေ့မီးရထားဗြိတိန်ဘဏ်တူရကီရဲ့အမျိုးသားမီးရထားကုမ္ပဏီ (တူရကီအမျိုးသား Railvvays) ၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူတည်ထောင်ခဲ့သည်ရောက်လာတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထိုရက်စွဲအပေါ်ဗြိတိန်အပါအဝင်ခုနစ်ခုအဖွဲ့ဝင်များ 14 ပါဝင်သည်ဟုအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရွေးယူကြ၏။
Mustafa Kemal Pasha ၏ Samsun-ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လိုင်းများအတွက် 21 စက်တင်ဘာလ 1924 groundbreaking အခမ်းအနားများတွင် "et¬တည်ဆောက်ရန်အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိမြေ-Das ဝယ်ယူ၏အမျိုးသားရေးမြို့တော်အတူရထားလမ်း ... Fantastic အရေးကြီးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသားရေးအစိုးရ၏ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်မည်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတကခန့်မှန်းခြင်းနှင့် suhulet mefaretl ရန်အလွန်ကျေနပ်နိုင်ပါတယ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
21 စက်တင်ဘာလ 2006 တူရကီနှင့်သြစတြီးယားအကြားမီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်, ကုန်တင်ကား Ro-La သယ်လာတယ်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ရထားတူရကီနှင့်သြစတြီးယားအကြားစက်တင်ဘာလ 21 2006, ထိုထရပ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များကို Ro-La ကြောင်း ... 21 / 09 / 2012 21 စက်တင်ဘာလ 1923 အရှေ့မီးရထားဗြိတိန်ဘဏ်တူရကီရဲ့အမျိုးသားမီးရထားကုမ္ပဏီ (တူရကီအမျိုးသား Railvvays) ၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူတည်ထောင်ခဲ့သည်ရောက်လာတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထိုရက်စွဲအပေါ်ဗြိတိန်အပါအဝင်ခုနစ်ခုအဖွဲ့ဝင်များ 14 ပါဝင်သည်ဟုအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရွေးယူကြ၏။ Fantastic Mustafa Kemal Pasha ၏ Samsun-ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လိုင်းများအတွက်သဲအခမ်းအနားအတွက် 21 စက်တင်ဘာလ 1924, "ငါတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အမျိုးသားရေးမြို့တော်မှတဆင့်တစ်ဦးရထားလမ်းဆောက်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးများ၏ဝယ်ယူ ... အရေးကြီးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်မည်ကဲ့သို့ကြီးမားသောကျေနပ်မှုနှင့်သမ္မတအားဖြင့် mefaretl တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး suhulet ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည် "သူကပြောသည်။ တူရကီနှင့်သြစတြီးယားအကြားကုန်တင်ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြင့် 21 စက်တင်ဘာလ 2006 ရထား ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: တူရကီနှင့်သြစတြီးယားတို့အကြားကုန်တင်ယာဉ်၏စက်တင်ဘာလ 21 2006 မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်က ... 21 / 09 / 2015 ယနေ့တွင်သမိုင်းစက်တင်ဘာလ 21 1923 အရှေ့မီးရထားဗြိတိသျှဘဏ်တူရကီရဲ့အမျိုးသားမီးရထားကုမ္ပဏီ (တူရကီအမျိုးသား Railvvays) ၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူတည်ထောင်ခဲ့သည်ရောက်လာတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထိုရက်စွဲအပေါ်ဗြိတိန်အပါအဝင်ခုနစ်ခုအဖွဲ့ဝင်များ 14 ပါဝင်သည်ဟုအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရွေးယူကြ၏။ Mustafa Kemal Pasha ၏ Samsun-ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လိုင်းများအတွက်သဲအခမ်းအနားအတွက် 21 စက်တင်ဘာလ 1924, "သား-Das ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကို၏အမျိုးသားရေးမြို့တော်ဝယ်ယူမယ့်ရထားလမ်းတည်ဆောက်et¬မှ ... Fantastic အရေးကြီးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်မည်မျှနိုင်ငံတော်သမ္မတကအလွန်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့် mefaretl နှင့်အတူ suhulet တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ သြစတြီးယားရထားအားဖြင့်ထရပ်ကားများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ 21 စက်တင်ဘာလ 2006 တူရကီ ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: တူရကီနှင့်သြစတြီးယားအကြားစက်တင်ဘာလ 21 2006 ... 21 / 09 / 2016 ယနေ့တွင်သမိုင်းစက်တင်ဘာလ 21 1923 အရှေ့မီးရထားဗြိတိသျှဘဏ်တူရကီရဲ့အမျိုးသားမီးရထားကုမ္ပဏီ (တူရကီအမျိုးသား Railvvays) ၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူတည်ထောင်ခဲ့သည်ရောက်လာတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထိုရက်စွဲအပေါ်ဗြိတိန်အပါအဝင်ခုနစ်ခုအဖွဲ့ဝင်များ 14 ပါဝင်သည်ဟုအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရွေးယူကြ၏။ Mustafa Kemal Pasha ၏ Samsun-ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လိုင်းများအတွက်သဲအခမ်းအနားအတွက် 21 စက်တင်ဘာလ 1924, "သား-Das ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကို၏အမျိုးသားရေးမြို့တော်ဝယ်ယူမယ့်ရထားလမ်းတည်ဆောက်et¬မှ ... Fantastic အရေးကြီးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်မည်မျှနိုင်ငံတော်သမ္မတကအလွန်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့် mefaretl နှင့်အတူ suhulet တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ သြစတြီးယားရထားအားဖြင့်ထရပ်ကားများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ 21 စက်တင်ဘာလ 2006 တူရကီ ...
စက်တင်ဘာလ 21 2006 ထရပ်ကားများကသြစတြီးယားကနေတူရကီမှရထား: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင် 21 / 09 / 2018 ယနေ့တွင်သမိုင်းစက်တင်ဘာလ 21 1923 အရှေ့မီးရထားဗြိတိသျှဘဏ်တူရကီရဲ့အမျိုးသားမီးရထားကုမ္ပဏီ (တူရကီအမျိုးသား Railvvays) ၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူတည်ထောင်ခဲ့သည်ရောက်လာတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထိုရက်စွဲအပေါ်ဗြိတိန်အပါအဝင်ခုနစ်ခုအဖွဲ့ဝင်များ 14 ပါဝင်သည်ဟုအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရွေးယူကြ၏။ Mustafa Kemal Pasha ၏ Samsun-ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လိုင်းများအတွက်သဲအခမ်းအနားအတွက် 21 စက်တင်ဘာလ 1924, "သား-Das ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကို၏အမျိုးသားရေးမြို့တော်ဝယ်ယူမယ့်ရထားလမ်းတည်ဆောက်et¬မှ ... Fantastic အရေးကြီးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်မည်မျှနိုင်ငံတော်သမ္မတကအလွန်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့် mefaretl နှင့်အတူ suhulet တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ သြစတြီးယားရထားအားဖြင့်ထရပ်ကားများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ 21 စက်တင်ဘာလ 2006 တူရကီ ...
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစက်ရုံတွင်စက်တင်ဘာလ 16 2006 နှင့်တူရကီကိုးရီးယားမိတ်ဖက်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ... : ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက် 16 / 09 / 2012 အဆိုပါဘိန်း-Banaz ယို 16 စက်တင်ဘာလ 1922 ရန်သူကိုရဲ့ဘေးထွက်မဟာတိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်းထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ အဖုံးများဘူတာအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာလမ်းတို့၏တိရစ်ဆာနျထိနျးကြောငျးကနေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကားများသောရထားလမ်းနှင့်အတူလုပ်ရမည်စတင်ခဲ့သည်။ 16 စက်တင်ဘာလ 2006 ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားစက်ရုံနှင့် Adapazari စက်ရုံအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏အခြေခံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Binali Yildirim ၏ဝန်ကြီးအလောင်းတော်ထားခဲ့ပါတယ် TCDD-Rotem ကုမ္ပဏီထံမှ-HYUANDAI- HACO- asas ဖက်စပ် EUROTEM နှင့်အတူတူရကီကိုးရီးယားမိတ်ဖက်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Taksim xnumx.levent ကနေစက်တင်ဘာလ 16 2000 အတွက်ဒါဟာဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ရထားတူရကီနှင့်သြစတြီးယားအကြားစက်တင်ဘာလ 21 2006, ထိုထရပ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များကို Ro-La ကြောင်း ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: တူရကီနှင့်သြစတြီးယားတို့အကြားကုန်တင်ယာဉ်၏စက်တင်ဘာလ 21 2006 မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်က ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: တူရကီနှင့်သြစတြီးယားအကြားစက်တင်ဘာလ 21 2006 ...
စက်တင်ဘာလ 21 2006 ထရပ်ကားများကသြစတြီးယားကနေတူရကီမှရထား: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင်
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစက်ရုံတွင်စက်တင်ဘာလ 16 2006 နှင့်တူရကီကိုးရီးယားမိတ်ဖက်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ... : ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: စက်တင်ဘာလ 22 2006 150 TCDD ။ ဒါဟာနှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပ။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ 16 2006 ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းပထမဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားစက်ရုံနှင့်တူရကီကိုးရီးယား ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းထဲမှာငါတို့တိုင်းပြည်တွင်စက်တင်ဘာလ 16 2006 ပထမဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားစက်ရုံ ...
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (279) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)